Umanyolo ngoba imbiza iziqukathi engadini - China Qingdao Inkosi enhle okusha Izinto
Amakhambi isikhule izigubhu kuzodinga Umanyolo amaningi kunalawo likhule ensimini. Lokho kungenxa yokuthi abanalo indlela ubuyise umsoco basebenzisa up njengoba zikhula. Kodwa ungakhathazeki, ungenawo ukuthenga Umanyolo fancy ngqo iziqukathi zakho, ungasebenzisa Umanyolo okufanayo imbiza izingadi izigubhu yakho futhi! Izincomo zami phezulu ngoba kancane ukukhululwa manyolo organic for amakhambi isikhule izigubhu iphilile Khulisa organic imbiza umanyolo Sustane zonke ukudla isitshalo zemvelo.
Related Post: A isitsha engadini ukukopela ishidi
Ukuze iziqukathi, kuwumqondo omuhle ukuze ungeze kancane ukukhululwa organic Umanyolo elimbudumbudu emgqonyeni, kanye usebenzisa amanzi Umanyolo encibilikayo nayo yonke inkathi yokulima. Ungakwazi ukwengeza kancane ukukhululwa imbiza organic engadini Umanyolo enhlabathini ngaphambi kokutshala amakhambi yakho, noma ungase afafaze elimbudumbudu phezu kwenhlabathi kanye bhala kube inhlabathi emva kokutshala
n kwalokho ukubambezela ukukhululwa granules, ungasebenzisa amanzi umquba oncibilikayo iziqukathi zakho nayo yonke inkathi yokulima ukugcina amakhambi yakho eziqinisa. Amanzi umquba encibilikayo mikhulu ngokunginika amakhambi yakho umfutho okusheshayo izakhi, kodwa zisetshenziselwa up (noma igezwa ebhodweni) ngokushesha ngakho kudingeka bonyana asetjenziswe kaningi.
Related Post: 5 amathiphu ezikhulayo pepper ezinkulu
ozithandayo amanzi uhlobo Umanyolo wami encibilikayo ngoba imbiza izingadi izinhlanzi emulsion netiye umquba. Noma iyiphi kulezi manyolo organic asebenza ukugcina esitsheni imbiza izingadi eziqinisa zonke ehlobo. Kodwa akudingeki ukuba Fuss kakhulu phezu ukusuthisa esitsheni amakhambi wakho bakhula njalo ngesikhathi, ngakho ungakhathazeki uma ukhohlwa lesi sinyathelo.
Amakhambi isikhule izigubhu uzodinga ukunakekelwa okwengeziwe kanye nomanyolo kuka amakhambi likhule ensimini. Kodwa ukusebenzisa nomanyolo for imbiza izingadi kanye iziqukathi Kulula, ikakhulukazi uma uqala ngeZwi, onothile organic futhi asebenzise umquba wemvelo.